မေးခွန်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကောင်း, မည်သည့်မိန်းကလေးတစ်ဦး, အဘယ်ကြောင့်ခွေးဒီတော့မေတ္တာနှင့်လေးနက်သောယောက်ျားသည်နှင့်မူးယောက်ျားတွေ။ တစ်ဦးခွေးရှိခဲ့လေရာရာ၌သူမသည်မီးမောင်းထိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ရှိသမျှသည်, လူရဲ့မျက်စိသူမ၏ပယ်မကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကတခြားအမျိုးသမီးထံမှကွဲပြားခြားနားပုံကိုတစ်ဦးခွေးနဲ့တူလူတို့သညျမဟုတျလော
သငျသညျအဘိဓာန် Dahl အတွက်ကိုကြည့်လျှင်ဤအယူအဆ၏မျှမျှတတ unflattering ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောခွေးကြောင်း "လင်းတ Scavenger," အဖြစ်ငှက်အမည်များကနေကြွလာသည်ဟုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို - ထိုတတ်နိုင်သမျှသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် "အစာ" ထုတ်လုပ်ရန်တှနျ့ဆုတျမဟုတျကွောငျးတစျခု, ထိုသို့ဂရုမစိုက်ပါဘူးအများပြည်သူအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးခွေးကိုကြိုက်, သူတို့သူ၏မိသားစုပျော်ရွှင်မှုကိုတစ်ဦးလေးနက်ခြိမ်းခြောက်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။
ခွေးမသည် scavenging သောငှက်များနှင့်မတူဘဲပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအသွင်အပြင်ရှိသည်။ မပေးတောင်မှထူးချွန်ပြင်ပဒေတာနှင့်အတူထိုကဲ့သို့အမျိုးသမီးတစ်ဦး, အကြီးကြည့်ရှုမည်။ သူမ soberly သင့်ရဲ့မျက်နှာနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်ဘယ်လောက်သိတယ်နှင့်မည်သို့, ဝတ်စားဆင်ယင်အရောင်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောပုံရိပ်ကိုဖန်တီးရန်သင့်ဆံပင် style ရန်, မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်လို့ပဲ။
လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မလုံလောကျဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားရန်စွမ်းရည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ပြီး, ခွေးမကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုငါသိ၏။ သူတို့ယောက်ျားကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိ, ခွေးမဂရုမစိုက်ပါဘူး, သူတို့ကငါပျော်မွေ့အတိအကျအရာကိုသိ, ဤယုံကြည်မှုလောက်မရှိတဲ့ဆွဲဆောင်မှု။ သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်များ ssutulennoy နောက်ကျောနှင့် inexpressive သွားရိုက်နှက်ခွေး၏ကံကြမ္မာတစ်မှိုင်း, လကျအောကျခံစကားရပ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးခွေးကိုခေါ်နိုင်မလဲ? ဒါဟာသူမတစ်ဦး "မီးခိုးရောင် mouse ကို" နှင့်၏အဓိပ္ပါယ်ထက်ပိုမိုချဉ်းကပ်လိမ့်မည်ဟုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် "အရောင်ဂျယ်လီ။ " ကျနော်တို့တင်ပါးကနေယုံကြည်မှုသွားခွေးပြန်ဖြောင့်, လှုပ်ရှားမှုနှင့်မျက်နှာစကားရပ်သူမကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအရာအားလုံးကိုခဲ့ကြောင်းပြောပါနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးချောမောရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမှာလည်းသူ့မျက်စိထဲမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အလင်းပေါ်လာပါသည်။ ကောင်းပြီ, သင်သည်ဤများ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်နိုင်မဟုတ်လျှင်?
ခွေးမသည်လူကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ ခါတိုင်းလိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ထံမှသူမ၏ beau မှအာရုံစူးစိုက်မှု၏လက္ခဏာသက်သေကိုမွငျလြှငျ, သူမမှည့်အသီးများကဲ့သို့, မိမိလက်သို့ကျလိမ့်မည်။ သို့သော်ခွေးမယောက်ျားတိုင်းမုဆိုးဗီဇအတွက်မွေးရာပါ play နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှောင့်အယှက်မပေးကြောင်းဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲရှည်လျားလွန်း, အောင်မြင်ရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့စေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဓိကခွေးလက်နက် - မတူညီတဲ့ဖြစ်နိုင်စွမ်းသောကြောင့်သူသည်ဤမိန်းမသည်နည်းလမ်းအသစ်ကဖွင့်လှစ်အခါတိုင်းသိသောဘယ်တော့မှမယ်လို့လူပုံရသည်။ ထိုသူတို့ကတစ်ဦးကြည်နူးဖွယ်နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တိုင်းပြည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသူကိုကိုလံဘတ်ခံစားရခွေးနှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိဘို့ပင်ယောက်ျားစိတ်အားထက်သန်မှု, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် "မုဆိုး" မှလွဲ. ။
ခွေးတစ်ဦးတက်ကြွသောရပ်တည်ချက်ယူကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်ပြန်ဖွင်မတတျနိုငျပါလျှင်, သင်အထီးစိတ်ကူးယဉ်အများစုကြိုဆိုဘိန်းဖြူဖြစ်ကြသည်။ သူကားအဘယ်သူတစ်ဦးအစပျိုးခဲ့အိပ်ရာအတွက်မိတ်ဖက်ချင်ဘဲနေရသနည်း ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ဦးခွေးအမြဲနှင့်နေရာတိုင်းထိုလူကပြိုင်ဘက်ထက်တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုကိုမြင်သောပထမဦးဆုံးစေခြင်းငှါမိမိအလိုဆန္ဒအတွက်ဒါစိတ်ဝင်စားအခါကြိမ်ရှိပါတယ်။
ခွေး - သူတို့မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ကိုနှိမ့်နိုင်ခဲ့ပါသောသဘောပေါက်ရန်အလွန်ချော့မော့တန်ဖိုးများယောက်ျားစုဆောင်းသူ, ထိုကဲ့သို့သော "မှူးမတ်" ကိုအလှဆင်။ ပေမယ့်, ကြီးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအနိုင်ရသူကိုတစ်စုံတစ်ဦးက - လိမ္မာပါးနပ်လိမ္မာ, စံပြရုပ်သေးခွေး။
အဘယ်ကြောင့်သင်ကတစ်ဦးခွေးသကဲ့သို့ထိုအမျိုးသားအကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားခွေးကိုပိုနှစ်သက်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအသွင်မြင်လာအောင်အဘယ်မှာဆိုသညျကားမဟုတ်လော ခြားနားချက်ကဘာလဲ? စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းအကြားကြောင်းအဖြစ်ဟုတ်ပါတယ်, တကယ်တော့အတူတူပါပဲ။ တစ်ဦးခွေးနဲ့တူလူတို့သညျအဘယျကွောငျ့သူတို့မရှိသလောက်လက်ထပ်ရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အကယ်. ? အားလုံးကဒီမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ခွေးနှင့်တကွ, ဇနီးထံမှငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်မနမ်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - အမြဲမြန်နှုန်း sawing နှင့်ကလေးများအတွက်ချန်ပီယံ, ဆူညံနားအောကျ, သူတို့နှုတ်ပိတ်ဖို့လိုတဲ့အခါ။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဝံ့တဲ့ခွေးနှင့်အတူတစ်မိသားစုကိုဖန်တီးရန်, သင်သူမ၏နွယ်ဖွားတားဆီးဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးထက်ပိုမိုအားကောင်းစုံလင်သောသို့မဟုတ်အထည်သို့မဟုတ်ပြင်းအားတစ်ခုအမိန့်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကိလေသာ၏ပျမ်းမျှလူကိုမခံမရပ်လိမ့်မယ်။
အတော်လေးတိကျတဲ့ယောက်ျားဖို့ခွေး၏သဘောထား - ကဆက်ဆံရေးဟာသည်အထိလူတနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူမ၏အဖြစ်မကြာမီအခြေအနေကအပြောင်းအလဲများအဖြစ်မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်မှယူဆောင်လာ, ထို့နောက်လူတပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူမျှမက, ခွေးကပုံပေါ်စေခြင်းငှါအဖြစ်လုံးဝအကြင်နာမဲ့သည်မဟုတ်, သူဘဝကနေလိုလားအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်နှင့်တွေအများကြီးယဇ်ကိုပူဇော်ရန်သူ၏ရည်မှန်းချက်၏မျက်နှာကို ထောက်. အဆင်သင့်ကြောင့်, သူ့ခံစားချက်တွေကိုမှတဆင့်ကူးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
က Man ၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်ပစ်ချင်သောသူတို့သညျအဘို့အမြိုးသမီးမြား၏ 16 အလေ့အထများ,!
ပျားရည်ဆူးပင် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
အမျိုးသားဥယျာဉ် "ဘင် Lomond"
ကုမ္ပဏီ၏ရည်းစားဟောင်းဂျူလီယန် Edelman တွေ့ဆုံခဲ့ Gala 2017 ကျင်းပ Adriana Lima afterparty
Positive အတွေးအခေါ် - လေ့ကျင့်ခန်း
မာရိုင်ကယ်ရီသည်သူ၏ဖောက်ပြန်ဂျိမ်း Packer နှင့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောလာဟလများကိုငြင်းပယ်ထားပါတယ်
Toni Braxton အရေးတကြီးကြောင့် lupus မှဆေးရုံတင်